क्लोप लिभरपुलको ट्रफी परेड अर्को बर्ष गर्न चाहन्छन् – Talking Sports
लिभरपुलका व्यवस्थापक योर्गन क्लोपले लिभरपुलको प्रिमियर लिग उपाधिको ट्रफी परेड कोरोना भाईरसको प्रकोप सकिए लगतै अर्को बर्ष गर्न आग्रह गरेका छन् ।
लिभरपुल ३० बर्षमा पहिलो प्रिमियर लिग उपाधि जित्न दुई जितबाट मात्र टाढा रहेको छ । कोरोनाको महामारीका कारण मार्चमा प्रिमियर लिग रोकिएपछि लिभरपुललाई लामो समय कुर्न परेको छ । प्रिमियर लिग बन्द रंगशालामा १७ जुन देखी पुन सुचारु हुँदै छ, त्यसैले लिभरपुलका समर्थकहरुले ट्रफी एन्फिल्डमा उचालेको प्रत्यक्ष हेर्न पाउने छैनन् ।
कोरोनाका कारण रंगशाला बाहिर ठूलो भिड जम्मा गराउन नमिल्ने भएकाले अहिलेको स्थितीमा ट्रफी परेड असम्भव देखिन्छ । क्लोप अवस्था सामान्य भएपछि मात्रै ट्रफी परेड गर्न सुझाउछन् ।
“आफुले सोचेको जसरी खुशीयाली मनाउन नपाउदा राम्रो लाग्दैन । रंगशालामा एक्लै खुशीयाली मनाउदै मलाई कार चढेर घर जान मन छैन । हामीले ट्रफि उचाल्दा यस्तो हुन सक्छ भनेर सोचेको थिएनौं तर अब यसलाई बदल्न पनि सकिदैन । यस बिषयमा धेरै सोचेर काम पनि छैन,” क्लोप भन्छन ।
“कुनै दिन आउला जब कसैले यो महामारीको खोप लगाउनेछ, यो समस्याको समाधान निकाल्ने छ र संक्रमण शुन्यमा झर्ने छ, त्यो समय हामीले जसरी खुशीयाली मनाउदा पनि हुन्छ । यदी अर्को सिजनमा १२ औं अथवा १३ औं चरणका खेलहरु भइरहेका छन् र हामीलाई मनाउन इच्छा लागेको छ भने कसले रोक्न सक्छ र ? हामीसंग हाम्रो ट्रफी हुने छ । हामी बसमा चढ्दै ट्रफिका साथ माथि खुला छतमा उभिदै पुरा शहर घुम्ने छौँ । कसैले हामीलाई पागल भन्छ भने म त्यसको मतलब गर्दिन,” उनले भने ।
“तर के त्यो खुशीयाली बिशेष हुनेछ ? यसमा कुनै प्रश्न नै छैन । त्यो फरक नै हुनेछ र कहिले काहि फरक हुदा राम्रो नै हुन्छ ।”
लिभरपुलले आफ्नो २९ मध्ये २७ खेल जिती सकेको छ । तर क्लोप र उनका खेलाडीको लक्ष्य भने अंक तालिकामा १०० अंक पुर्याउने हुने छ । यो सिजन ऐतिहासिक बन्न सक्छ । केवल क्लबका लागि मात्रै होइन । सामान्य रुपमा नै ऐतिहासिक हुनेछ । क्लबले पनि सोचे भन्दा धेरै अंकका साथ लिग जित्न सक्छ र हामी लागि पर्ने छौ ।
कहा छन् भारतलाई अण्डर १९ बिश्वकप जिताउने कप्तान उन्मुक्त चन्द ?